Filtrer les éléments par date : lundi, 09 mars 2020
lundi, 09 mars 2020 14:17
Fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy: Nitranga loza 38 ny taona 2019 ary 3 hatramin’ny fiantombohan’ny taona 2020
Niisa 38 ny loza nitranga ny taona 2019 teo amin’ny sehatry ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy, ary 3 izany amin’izao fiantombohan’ny taona 2020 izao, nisy ny aina nafoy vokatr’izany.
Misy ny paik’ady iarahan’ny Ministeran’ny Fitaterana, ny Fizahantany ary Famantarana ny Toetrandro sy ny APMF entina hampihenana io tahan’ny lozam-pifamoivoizana io sy ho fanatsarana ity seha-pitaterana ity.
lundi, 09 mars 2020 13:48
Morondava: Sady nankalaza 8 marsa no nizara fanomezana ho an’ireo mpianatra mendrika
Nilamina sady niavaka ny fankalazana ny 8 marsa, Andro iraisam-pirenena ho an’ny Vehivavy tato Menabe. Betsaka ny reny nandray anjara tamin’ireo hetsika ara-panatanjahantena isany nentina nanamarihana izany, nindrindra ny baolina kitra.
Fa nanolotra fanomezana ho an'ireo mpianatra telo voalohany tao amin’ny EPP Andakabe ihany koa ny vehivavy miasa ao amin’ny DRENETP Menabe, hetsika mbola tafiditra tao anatin’ny fankalazana ny 8 marsa ihany koa.
lundi, 09 mars 2020 13:29
Toamasina: Tonga ny sambo sinoa mitondra ny fitaovana tetikasa Filoham-pirenena
Miantsona eto amin'ny seranan-tsambon'ny Toamasina amin'izao ilay sambo sinoa Xichanghai mitondra ireo fitaovana anatontosana ny tetikasan'ny Filoham-pirenena.
Araka ny loharanom-baovao eo anivon'ny seranan-tsambo dia tsy misy ahiana ny resaka coronavirus momba ity sambo sinoa ity, satria dia efa mihoatran'ny 40 andro no nitoka-monina io sambo io, ary 6 volana tsy tany Sina. Voalaza fa tsy avy any Sina ireo entana ampidinina eto ireo fa nalaina toeran-kafa fotsiny ihany. Tsy nisy ihany koa mpiasa sinoa nampidinina teny ambony sambo hiasa eto Madagasikara tamin'io sambo vao tonga io.
Raha ny loharanom-baovao hatrany dia tena entitra ny fepetra momba ny coronavirus raha eto amin'ny seranan-tsambo Toamasina. Hatramin'ilay sambo lehibe mpitondra mpizahan-tany Costa aza dia niverim-potsiny, na dia efa feno bajaj 200 mahery no niandry teo ivelany hitsena vahiny, ary nody fotsiny ireo mpivarotra art malagasy.
lundi, 09 mars 2020 12:52
Faritra Menabe: Basy 33 sy omby 73 no azon’ny Miaramila mpampandry tany
Mamita iraka fampandriantany any amin'iny Faritra Menabe iny ny miaramilan'ny Zone Rurale Prioritaire de Sécurité na ZRPS Bravo izay manana ny foibeny ao Vakinankaratra tao anatin'ny roa volana mahery izao. Nandritra izay fotoana izay dia omby miisa 73 no tafaverina amin'ny tompony ary basy 33 isa, tsy nisy taratasy mazava no sarona.
Misy ihany koa ny asa sosialy ataon'ny Tafika toy ny fizaham-pahasalamana.
lundi, 09 mars 2020 10:22
Tobin-tsolika: Tany mirefy 88ha no hanorenana azy eny amin’ny Kaominina Bongatsara
Tinapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra farany teo, ny hakan’ny fanjakana ny tany voakasiky ny fanorenena toby vaovao fitehirizana solika eny amin’ny Kaominina Bongatsara, Antananarivo Atsimondrano. Tany mirefy 88ha no hiorenan’ilay fotodrafitrasa vaovao, izay hahakasika ny Fokontany Amboanjobe sy Ambohidrazana.
Tamin’ny 2010 no efa nanomboka ny firesahana ny hamindrana ny toby fitehirizana solika eo Ankorondrano, izay tantanan’ny Logistique Pétrolière, hisorohana ny loza noho izy io afovoan-tanàna loatra.
lundi, 09 mars 2020 10:20
Andro iraisam-pirenena ho an’ny Vehivavy: Antsiranana no hampiantrano ny fankalazana amin’ny 2021
Tontosa soamantsara ny 8 martsa, tao Toliara, ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Vehivavy taona 2020, Antsiranana no hampiantrano ny fankalazana amin’ny 2021.
lundi, 09 mars 2020 10:02
09 mars: Journée Mondiale du rein
09 mars: Journée Mondiale du rein.